Uhambo lokubulela lulindeleke ukuba luqhubele kwi-20 yezigidi zabakhweli
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Uhambo lokubulela lulindeleke ukuba luqhubele kwi-20 yezigidi zabakhweli
isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Lungela uhambo lokubulela
Ulawulo loKhuseleko lwezoThutho lwase-United States (TSA) luvavanye elona nani liphezulu labakhweli ngosuku olunye kwiveki ephelileyo oko kwaqala ubhubhane. Balindele ixesha lokuhamba nge-Thanksgiving elixakeke kakhulu, eliqwalaselwa ukusuka nge-19 kaNovemba ukuya kwi-28 kaNovemba.
TSA baxele ukuba banabasebenzi abaneleyo ukuba baphathe abakhweli abaqikelelwa kwizigidi ezingama-20 abaya kudlula kwindawo yabo yokukhangela ukhuseleko ngexesha lokuhamba elichaziweyo. Olona suku luphezulu lokuhamba kwimbali ye-TSA yayingeCawa emva koMbulelo ngo-2019 ngaphambi kobhubhane. Ngelo xesha abakhweli abazizigidi ezi-2.9 baye bahlolwa ngabasebenzi be-TSA.
Ezona ntsuku zixakekileyo ze Uhambo lokubulela NgoLwesibini nangoLwesithathu phambi koMbulelo ngoLwesine nangeCawa emva koMbulelo.
Umlawuli we-TSA uDavid Pekoske uthe: “Silindele ukuba uhambo lusondele kakhulu kumanqanaba obhubhane kule holide, kwaye sinabasebenzi kwaye sibalungiselele abahambi ngeeholide. Sisebenzise iitekhnoloji eziphucula amandla okubona kunye nokunciphisa ukudibana komzimba, kwaye kubalulekile ngokulinganayo ukuba abakhweli balungiselelwe ngeengcebiso zokuhamba ngeyona ndlela isebenzayo yokukhangela amava. Ngokuphuculwa kwamazinga okugonya kwilizwe lonke kunye nokuzithemba okukhulu kuhambo olusempilweni, kuya kubakho abantu abaninzi abahambayo ngoko ke cwangcisa kwangaphambili, hlala uphaphile kwaye uziqhelise ububele.
“Ndicebisa ukuba abahambi bathathele ingqalelo isikhokelo esinikelwa ngamagosa e-TSA kwindawo yokukhangela. Basenokuba bakwalathisa kumgca omfutshane okanye bakukhokelela kumntu ohamba kancinane. Yaye kusenokwenzeka ukuba bakunika icebiso eliya kunciphisa amathuba okuba ufune ukuthotywa.”
I-TSA icebisa abahambi ukuba bavumele ixesha elongezelelweyo lokuhamba ngeholide kwaye bafike ngaphambi kwexesha kunesiqhelo. Banika ezi ngcebiso kananjalo:
Abahambi, abasebenzi be-TSA, kunye nabanye abasebenzi beenqwelomoya kufuneka banxibe imaski njengoko kumiselwe ngumyalelo womanyano wemaski. Wonke umntu okwizikhululo zeenqwelomoya, kwizikhululo zebhasi nakwizikhululo zikaloliwe, kwinqwelo-moya yabakhweli, kwizithuthi zikawonke-wonke, kwiziporo zikaloliwe, nakwiibhasi ezihamba phezu kweendlela ezisebenza kwiindlela ezimiselweyo ezimiselweyo kufuneka anxibe imaski. Ukuba umhambi akakhange azise imaski, igosa le-TSA liya kubonelela ngemaski kuloo mntu kwindawo yokuhlola.
Lungiselela ukhuseleko xa upakisha kwaye uqinisekise ukuba akukho zinto zithintelweyo kwimpahla. Yazi ukuba kukuphi ukutya okufuneka kufakwe engxoweni etshekiweyo. I-Gravy, i-cranberry sauce, iwayini, i-jam, kunye nokugcinwa kufuneka zonke zingene kwisikhwama esitshekiweyo, kuba azikho izinto eziqinileyo. Ukuba unako ukuyichitha, ukuyitshiza, ukuyisasaza, ukuyipompa okanye ukuyigalela, ngoko ayiqini kwaye kufuneka ifakwe kwisikhwama esitshekiweyo. Njengesiqhelo, abakhweli banokuzisa ukutya okuqinileyo okunje ngeekeyiki kunye nezinye izinto ezibhakiweyo kwiindawo zokujonga.
Kulungile ukuza nesicoci sesandla. I-TSA ngoku ivumela abahambi ukuba beze nesikhongozeli esinye solwelo solwelo oluya kuthi ga kwii-ounces ezili-12 ngomkhweli ngamnye kwiibhegi ezithweleyo kude kube kuphinde kunikwe esinye isaziso. Abakhweli banokulindela zonke izikhongozeli ezinkulu ze-3.4 ii-ounces ziya kufuneka zihlolwe ngokwahlukeneyo, okuya kongeza ixesha elithile kumava abo okukhangela. Abakhenkethi nabo bavumelekile ukuba beze nezosuli zotywala okanye ezosulelayo ezichasene nebhaktheriya xa beqhuba, imithwalo ejongweyo, okanye zombini.
Bhalisa okanye uhlaziye ubulungu bakho be-TSA PreCheck®
Abantu abafumene i-TSA PreCheck kwiminyaka emihlanu eyadlulayo ngoku bayakwazi ukuhlaziya ubulungu babo kwi-intanethi ngesaphulelo. Abantu abangenayo i-TSA PreCheck kufuneka babhalise ngoku ukuze bafumane izibonelelo ze-TSA PreCheck, ezifumaneka kwizikhululo zeenqwelomoya zase-US ezingaphezu kwama-200. Abahambi ababhalise kwinkqubo ethembekileyo yabahambi, njenge-TSA PreCheck, akufuneki basuse izihlangu, iilaptops, ulwelo, amabhanti kunye neebhatyi ezikhanyayo. Ubulungu be-TSA PreCheck buxabiseke kakhulu ngoku kunangaphambili kuba inciphisa iindawo zokuchukumisa ngexesha lo bhubhani kwaye ibeka abahambi kwimigca yokhuseleko enabahambi abambalwa kwaye ihambe ngokukhawuleza, ekhuthaza ukungenelela ekuhlaleni. Ukufumana inkqubo yabahambi ethembekileyo eyenelisa iimfuno zakho zohambo, sebenzisa isixhobo sokuthelekisa umhambi esithenjiweyo se-DHS.
Cela inkxaso yabakhweli
Abahambi okanye iintsapho zabakhweli abakhubazekileyo kunye/okanye iimeko zonyango zinokutsalela umnxeba kumnxeba woncedo we-TSA Cares simahla kwa-855-787-2227 ubuncinci iiyure ezingama-72 phambi kokubhabha nayo nayiphi na imibuzo malunga nemigaqo-nkqubo yovavanyo, iinkqubo kunye nokufumanisa ukuba ungalindela ntoni indawo yokuhlola ukhuseleko. I-TSA Cares iphinda ilungiselele uncedo kwindawo yokukhangela.
Phendula imibuzo yakho ngaphambi kokuba uye kwisikhululo seenqwelomoya
Buza iTSA. Abahambi banokufumana uncedo ngexesha lokwenyani ngokuthumela imibuzo kunye nezimvo zabo ku-@AskTSA kuTwitter okanye kuFacebook Messenger. Abahambi banokufikelela kwiZiko loQhagamshelwano le-TSA kwi-866-289-9673. Abasebenzi bafumaneka ngentsimbi yesi-8 kusasa ukuya kweye-11 emva kwemini ngeentsuku zeveki nango-9 ekuseni ukuya ku-8 ngokuhlwa ngeempelaveki/ngeeholide; kunye nenkonzo ezenzekelayo ifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki.
Qinisekisa ukuba unesazisi esifanelekileyo
Ngaphambi kokuya kwisikhululo seenqwelomoya, abahambi kufuneka baqinisekise ukuba banezazisi ezamkelekileyo. Ukuqinisekiswa kwesazisi linyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yokuhlola ukhuseleko.
Njengesikhumbuzo, ukwazisa uluntu ngundoqo ekuxhaseni iinzame zokhuseleko zeTSA. Abahambi bayakhuthazwa ukuba bachaze izinto ezikrokrisayo, kwaye khumbula: Ukuba Ubona Into, Yitsho Into™.